Ghọta Otú Paykwụ Pergwọ Kwa Pịa Na-enyere Aka Gị Organic | Martech Zone
A na-egwu ya n'ime gị kwa ụbọchị site na ịre ahịa gurus… ịkwesighi ịkwụ ụgwọ maka clic. Buru onye mbu, dee ezigbo ọdịnaya, kesaa na mgbasa ozi - ma lee anya na ahia ga-abia n'onu uzo gi. Ma ọ bụ ha ga-? Anọgidere m na-ekwusara ndị na-ege anyị ntị na ọ bụghị otu onye na-ajụ ibe ya, ọ bụ otu ha nwere ike isi nye nri ma ọ bụ soro ibe ha. N'okwu nke Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta vesos Njikwa Ngini Nchọnchọ na Lezienụ kwa Pịa, enwere ụfọdụ mmekọrịta dị egwu na iji ha abụọ.
Podcast na-esote anyị na Edge nke Web Radio ga-atụle isiokwu a yana ihe ndị ọzọ mere ụlọ ọrụ gị ga-eji tinye ego na Pay Per Click.
N'ịtụgharị Keywords - Ọ bụrụ n ’ibido n’okporo ihe ịde ederede ka ị nweta ọkwa, kedụ ihe ị ga - ede? Kedu mkpụrụ okwu kachasị mma nke ga-agbanwe ọtụtụ okporo ụzọ? Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị echiche… ha na-eme ụfọdụ nyocha na ụlọ ọrụ ha na ndị asọmpi wee wepụta ndepụta. Mgbe ahụ, ruo ọtụtụ ọnwa, ha na-etinye ọtụtụ akụ iji nweta ọnọdụ na usoro ndị ahụ. Ma eleghị anya, ha na-na-họọrọ… naanị ịchọpụta na ọ dịghị onye na-converting na ha na saịtị Ko. Kama itinye oge na ume ahụ n'ime ọdịnaya na nyocha ihe ọmụmụ, ha gaara eji obere ego na ụgwọ kwa Pịa ma nwalee mkpokọta isiokwu iji hụ ihe gbanwere nke kacha mma. Ozugbo ị matara ihe na-agbanwe, mgbe ahụ ị nwere ike ide, kesaa, ma kwalite ọdịnaya gbasara isiokwu iji melite ogo ọchụchọ gị ma belata ọnụego gị niile na-eduga.
SERP Estlọ Ala - you nwetụla mgbe ịchọrọ ngwaahịa ma ọ bụ ụdị ngwaahịa bụ isi ma ju gị anya ịhụ na ha akwụwo mgbasa ozi na ngwaahịa ma ọ bụ aha aha ha? E nwere di na nwunye ihe kpatara nke a… nke mbụ bụ ya mere ha asọmpi adịghị ikele na ndị na-arụpụta. Mana ihe gbara ọkpụrụkpụ bụ na ị nwere ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ ịpị gị site na Nsonaazụ Nchọgharị Nchọgharị (SERP) ọbụlagodi mgbe ị nọ n'ọkwá dị elu! Mgbe ị na-ahazi nke mbụ, ị nwere ike iwelie pịa site na ọnụego (CTR) site na 50%, mgbasa ozi PPC n'akụkụ ọkwa sitere na 2 ruo 4 nwere ike ịbawanye CTR site na 82%, yana maka ọkwa n'okpuru 5 CTR ga-abawanye 96% na nkezi !
Site na Nchọgharị Inyocha Ala - Nchọpụta Google: Ọbụna na Nhazi # 1 Organic, Akwụ ụgwọ Mgbasa Ozi Na-enye Ndenye Clicks 50%:
Ọnụego mgbanwe - Mgbe onye ọrụ pịa na SERP wee rute na saịtị gị, ị nwere ike ịchọpụta na, ewezuga okporo ụzọ, okporo ụzọ ọchụchọ akwụ ụgwọ nwere uru kachasị elu na ọnụego ntụgharị kachasị. Nke ahụ dị oke mkpa ma ị ghazie nchịkọta nke ọma ma soro nke ọma mkpọsa gị nke ọma. Ozizi dị n’azụ nke a dị mfe - mgbe ndị ọrụ njin ọchụchọ dị njikere ịtụgharị, ha wụliri na SERP wee pịa nsonaazụ kacha elu.
Remarketing - Otu uru dị ukwuu nke PPC nwere karịa atụmatụ SEO gị bụ uru nke ntugharị. Ntughari ahia na-agbasa mgbasa ozi nye ndị mmadụ gaalarịị na saịtị gị (mana ha azaghị zụta) site na izipu ozi ma ọ bụ onyinye na-enweghị atụ. Iji Google Adwords, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịmepụta mkpọsa gafee ọchụchọ yana ọbụlagodi saịtị ndị ọzọ ga-egosipụta mgbasa ozi gị mgbe onye ọbịa bịara na saịtị gị wee pụọ. M na-atụ ụjọ na ị gaghị enwe ike iso onye dị otú ahụ jiri ọchụchọ ọchụchọ wee buru nnukwu uru.
Achụkwala ọchụchọ a kwụrụ ụgwọ. Dika atumatu ọdịnaya abanyela na ewu ewu, asọmpi a di egwu - choro mmefu mmefu iji mee ihe di iche. M ga-agba gị ume ka ị were onye ọkachamara (ọzọkwa, mmefu ego gị ga-eripịa ọnụego karịrị nghọta!). Nwalee ọtụtụ ngwakọta, jiri usoro kachasị mma, chụọ mkpụrụ okwu ntụgharị na usoro aghụghọ iji belata ọnụ ahịa kwa ndu, ma gbanwee ìgwè mmadụ gaa ụlọ ọrụ gị. Paykwụ ụgwọ kwa Pịa bụ ezigbo enyi enyi ọchụchọ.
Tags: mgbanwe ntụgharịịtụgharị Keywordsọnụ nke redio weebụisiokwu mgbanweorganicnyocha ọchụchọkwụọ ụgwọ kwa Pịappcna-emegharị ahụala ọchụchọagwosert ctrụlọ serp